घरको कुन दिशामा कुन बिरुवा रोप्ने ? – Naya Kura Daily
September 9, 2020 86
हामी आसपासका खराब शक्तिबाट बच्ने उपायबारे वास्तुशास्त्रमा सुझाइएको छ । वास्तुमा जीवनमा ऊर्जाको संञ्चार भर्ने, दिशाका बारेमा अध्ययन गर्ने र घर, भवन, मन्दिर कस्तो बनाउनु पर्ने त्यसबारे जानकारी दिइएको हुन्छ । यति मात्र होइन, वास्तुले घरमा कुन चीज कुन दिशामा हुनु पर्दछ त्यसबारेसमेत जानकारी हुन्छ ।
हामीले घर आसपासमा रोप्ने फूल, बिरुवाहरु सही दिशामा रोपिएन भने यसले वास्तु दोष उत्पन्न गराउँछ । यतिमात्र होइन गलत दिशामा भएका फूल र अन्य बिरुवाले नकारात्मक ऊर्जा समेत बढाउँछ । त्यसैले घरमा फूल, बिरुवा रोप्दा वास्तु अनुसार हुनु पर्दछ ।
वास्तुमा उक्तर दिशालाई बुध ग्रहको दिशा मानिन्छ । यो दिशा खुल्ला र हावायुत्त हुनु पर्दछ । यस दिशामा हरियाली हुनु पर्दछ । उत्तर दिशा कुबेरको समेत स्थान मानिन्छ । त्यसैले यस दिशामा तुलसी, केराको बोट, सयपत्री फूलको बिरुवा रोप्नु पर्दछ । यसो गरेमा घरमा चर्म रोग नभित्रने धार्मीक मान्यता छ ।
वास्तु अनुसार पूर्व दिशा सूर्य ग्रहको हुने गर्दछ । यस दिशामा हरियो घाँस, दुबो रोप्नु पर्दछ । यस्तो गरेमा घरमा सूर्य देवको कृपा प्राप्त भई आत्मसम्मान, यश र आरोग्य जीवन प्राप्त हुने धार्मीक विश्वास छ ।
वास्तु अनुसार दक्षिण मंगलको दिशा हो । यस दिशामा रातो फूलका बिरुवा रोप्नु अत्यन्त शुभ मानिन्छ । यसो गर्दा घरमा कुनै पनि प्रकारको बाधा उत्फन्न नहुने र रक्त सम्बन्धी रोगबाट समेत मुत्ति पाइने धार्मीक विश्वास छ ।
घरको पश्चिम दिशा चन्द्रमाको दिशा मानिन्छ । यस दिशामा चमेली, इन्द्रकमल फूल, एलोवेराको बिरुवा रोप्नु पर्दछ । यसले घरको वातावरण शुद्ध गर्नुको साथै घरमा मानसिक विकार उत्पन्न हुन नदिने धार्मीक मान्यता छ ।
Nextदक्षिणकाली भगवतिको दर्शन गराै ! मनकाे इच्छा पुरा हुन्छ